Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Okuningi okuvela kumbhali Cómo Aumentar Su Rendimiento Oku-odwe ngaphambilini SEO Con Enlaces Internos: Consejos De Semalt
Ama-imeyli we-webmasters, bese u-creativity. Ukukwazi ukukwazi ukwenza lokhu kungcono kakhulu. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza izikhangiso ezivela ku-SEO en el sitio. Iningi lezinto ezibaluleke kakhulu ezivela ku-SEO ku-intanethi yezingane zakho. Ngaphandle kwesimiso, la mayoría de la gente no le presta atención. Ukuqothulwa kwamaphesenti angaphezu kwamanye ama-at-at-a-one-en-delta
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe 1 Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Okuningi okuvela kumbhali Artem Abgarian, el Gerente Senior de Éxito del Cliente de Semalt , Uma kunesidingo sokususa phakathi komunye umuntu
U-herramienta efectiva ongayisebenzisa ukuze ulandele imininingwane elandelayo kwi-Screaming Frog. Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... 1) Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate?
Izakhiwo ezingaphansi kwe-internos adicionales
Uma unomphela, i-debemos ihlangabezana ne-URL engaba yiphenyo. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma uchofoza, qhafaza i-URL correcta bese uhlunga i-HTML. Okuqhubekayo, qhafaza "in enlaces" bese uchofoza phansi. Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
I-albhamu kuphela ayithumele ngaphandle kwe-interns. Ngaphandle kwe-export, qhafaza ukhethe i-URL bese ukhethe "Ukuthumela> Izakhiwo."
Ukususwa kokungeniswa kwamaphesenti angaphansi kwesigatshana, kungabikho okushiwo yi-list. I-URL engcono kakhulu ye-URL yezimpendulo zedayimenti ye-taxonomía kanye nama-akhawunti we-seguimiento..I-URL ye-URL ibe i-documento ye-Google Amadokhumenti kanye ne-akhawunti ye-alfabéticamente. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-URL ye-URL, bheka, bheka izinkinobho zokuqeda.
I-akhawunti yakho isetshenziselwa ukukhetha i-URL. Uma ungasebenzisa Mac usebenzisa i-+ + F. Uma ulawula i-Windows + F ukuqeda, bheka le uhlu lwezinkampani zangaphakathi.
I-optimización en el sitio
Uma uhlela uhlu lwabantu, bheka ukuthi kukhona okungafani nalezi zinto. Amanothi angasetshenziswa.
Leli phepha elisetshenziselwa ukusebenzisa i-URL, elibhalwe phansi kanye ne-etiquetas de título.
I-Verifique si el enlace ishadi lokuqala.
Uma uqala ukufaka ama-100 we-artists
I-albhamu kuphela I-albhamu kuphela I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile.
Sebenzisa ukuhamba kweGoogle ukuze ubuyekeze amakhompiyutha kanye nombhali.
Cómo usarlo dependi de si su sitio web es nuevo o si ha existido.
Khetha le webhusayithi, bese uchofoza igama elilandelayo bese ukhetha izinkomba ezilandelayo. Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
A continuación, realice una auditoría de backlink ukuze uqonde ukuhamba phambili kwe-inthanethi for the main página. Sebenzisa i-main page ukuze uthole imibono yokuqukethwe. Chofoza ukufaka SEMrush ukuze uthole uhlu olulodwa lwe-palabras. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uhlele uhlu olulodwa lwezinkampani ezisezingeni eliphezulu
I-web site ye-Sitio
I-El proceso isingeniswa yi-web site etholakalayo. De las palabras clave decida su contenido oyinhloko. Luego, sebenzisa i-SEMrush ukuthumela ngaphandle kwe-todos los contactos kanye ne-verifique hhayi uma uthola ukuthi yi-clarificada para palabra clave. Ukugcwalisa leli phepha.
Ukubaluleka kokulawula i-sobre sus inqwaba ye-internos. Ukuze uthole ukwaziswa okulandelayo, sebenzisa amaphuzu akho ukuze ubone ukuthi yiziphi izinkampani ezithandwayo ezithintekayo ezifanele futhi zenzeke kubantu abavakashelayo.